Monday November 25, 2019 - 19:23:53 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Dowladda Federaalka ayaa markii ugu horraysay caddaysay ujeedkii laga lahaa in Sheekh Max'med Umal uu muxaadaro ku qabto magaalada Muqdisho balse dibad baxyo ay dhigeen kooxaha Suufida ay sababtay in Muxaadaradaas la joojiyo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa hoggaamiyaal katirsan Kooxaha Suufida u sheegay in socdaalka Sheekh Umal ee magaalada Muqdisho uu ahaa sidii dowladdu ugaga faa'iidaysan laheyd ladagaallanka Xarakada Al Shabaab oo uu ku tilmaamay 'Argagaxiso.
Cod sir ah oo laga duubay Farmaajo xilli uu khadka taleefanka kula hadlayay qaar kamid ah hoggaamiyaasha Kooxaha Suufida ayuu ku xaqiijiyay in ujeedka ay ka lahaayeen in Umal uu muxaadarooyin ka dhigo Muqdisho ay aheyd in ay ku wajahaan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Farmaajo ayaa carabaabay in Umal uu dowladda kala shaqeynayo sidii Xarakada Al Shabaab meel loogasoo wada jeesan lahaa taas oo ka dhigan in wadaada xumayaashu ay yihiin kuwa fulinaya ajandayaasha siyaasadda dowladda waxayna badanaa soo saaraan fataawaad been abuur ah oo ay lacago dollar ah ku qaateen.
Wadaada xumayaasha Dowladda Federaalka iyo ciidamada shisheeye taageersan ayaa marwalba soo saara Fataawaad ay diinta uga been sheegayaan balse fataawaadkaas wax saameyn ah kuma yeeshaan halganka Jihaadiga ah ee Soomaaliya ka socda.
Sheekh Umal qudhiisa ayaa khudbad siyaasadeed oo uu Muqdisho ka jeediyay si aad ah ugu taageeray dowladda Farmaajo isagoona ugu baaqay shacabka in ay la saftaan dowladda oo uu ku sifeeyay mid dhaxal u ah Soomaalida!.
Hoggaamiyaasha kooxaha Suufida oo Umal iyo Bashiir Axmed Salaad u arka kuwa booska u dhowaashiyaha dowladda Farmaajo ka cariirsanaya ayaa dhigay dibad baxyo rabshado watay dibad baxyadaas oo sababay in gabi ahaanba Umal laga mamnuuco in uu Muxaadaro ku dhigo garoonka kubadda cagta Koonis.
Caddeymahan cusub ee Farmaajo kasoo yeeray ayaa umadda Soomaaliyeed ucaddeynaya dhagarta ay kuwa isku sheegay culimada umaleegayaan halganka jihaadka ee ka dhanka ah shisheeyaha iyagoo shaati diimeed gashan.
Halkan ka degso Codka sirta ah ee Farmaajo laga duubay ama hoos ka dhageyso